जहाँ महिलाको दूध दुहेर बेचिन्छ ! – Pahilopana | Nepali News Site | Online Nepali News
जहाँ महिलाको दूध दुहेर बेचिन्छ !
एजेन्सी: गाई, भैसीको दूध त बिक्री हुन्छ, यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । महिलाले आफ्नो दूध पनि बिक्री गर्छन भन्दा तपाईँलाई पत्यार नलाग्नसक्छ, तर यो सत्य हो ।
विश्वमा यस्ता देश पनि छन जहाँ महिलाले आफ्नो दूध दुहेर बिक्री गरिरहेका छन् । कम्बोडियाका महिलाले आफ्नो दूध प्रतिलिटर सात डलरमा अमेरिकामा बिक्री गर्ने गरेका छन् । यसरी दूध बिक्री हुने देश हो कम्बोडिया । लामो समय चलेको यो काम केही दिनअघि मात्र स्थानीय सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
गरिब मुलुक कम्बोडियाका महिलाहरुले दुध बेच्न थालेको लामो समयपछि स्थानीय सरकारले यस्तो कामलाई तत्काल प्रतिबन्ध लगाउन स्थानीय प्रशासनलाई भनेको छ । त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंगलबार महिलाहरुबाट संकलन गरेको दूध बिक्रीमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको हो ।
अमेरिकामा कम्बोडियाका महिलाको दूध प्रतिलिटर सात डलरमा खरिद गरेर २० डलरमा बिक्री गर्ने गरिएको थियो । भाइस म्यागेजिनका अनुसार कम्बोडियाका ५० जना महिला यस्तो कार्यमा लागेका थिए । कम्बोडियाका महिलाले दुहेर पठाएको दूध अमेरिकाका बालबालिकाहरुलाई खुवाउने गरिएको थियो ।
Previous: कात्तिक १६ देखि फिल्म साउथ एसिया सुरु हुँदै
Next: मेजर रामप्रसाद गुरुङ लायन्स अस्पतालको अध्यक्ष
वैज्ञानिकहरुले बनाए व्याट्रीबिना चल्ने मोबाइल, यसरी गर्छ काम
साउदी राजकुमारले जुवामा हारे ३६ करोड डलर र पाँचवटी श्रीमती !
अनौठो क्षमता: जो उल्टो बनेर रुखमा चढ्छन्
सूर्तीले उडाइँदैछ जहाज, सुरुमा उडे ३ सय यात्रु
उँटको सुन्दरता प्रतियोगिता हुने, विजेतालाई ३ अर्ब !
‘सुत्नुअघिको सेक्सले लाग्छ मिठो निद्रा
सदियौँदेखि एउटै खम्बामा अडिएको छ यो मन्दिर
भूकम्पका कारण काठको टेको लगाएर अड्याइएका कैयन् मन्दिर देख्न पाइन्छ काठमाण्डौमा । कहिले टेको फुस्किन्छ र मन्दिर भत्किन्छ भनेर मानिसहरु त्राहिमाम हुन्छन् । तर चीनमा एउटा यस्तो प्राचिन मन्दिर छ जुन सदियौँ देखि एउटै टेकोमा अडिइरहेको छ । चीनको दक्षिणपश्चिमस्थित ...